Filtrer les éléments par date : mardi, 04 février 2020
mardi, 04 février 2020 20:35
Halatra "buses": Olona miisa 9 voasambotry ny Zandary
Tra-tehaky ny Zandary Ireo olona nanimba sy nangalatra fantson-drano lehibe "buses" tamin'ireo tetezana amin'ny lalam-pirenena ao anatin'ny Faritra Sofia, rehefa nokarohina nandritra ny dimy andro.
Olona miisa sivy, fito lahy, roa vavy, no tratra fa nanimba, nandroba ary nangalatra ireo "buses" miisa roa tao Antsahabe sy iray tao Anjiamangirana, samy ao amin'ny Distrika Antsohihy.
Hita avokoa ireo "buses" miisa telo, ka ny iray dia efa nosimbaina navadika ho fitaovana hafa toy ny antsy, angadin'omby...
mardi, 04 février 2020 16:38
OTIV Boeny: Mahatsiaro voarirarira ireo mpikambana nanana petrabola tao
Tsy very hafoy, nefa koa tsy hita hantenaina ny volanay mihitsoka ao amin’ny OTIV Boeny, hoy ny mpikambana manana petrabola tao. Alefa mankany amin’ny Paositra izahay, fa hoe efa nisy fifanarahana eo amin’ny PAOMA (Paositra Malagasy) sy ny OTIV Boeny rehefa noraisin’ny fitondram-panjakana an-tànana mivantana ny famahana ny olan’ny OTIV Boeny, amin’ny alàlan’ny fidirana an-tsehatry ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Fampiroboroboana ny Haitao ara-kajy mirindra. Nisy ny fanaovan-tsonia ny fifanaraham-piaraha-miasa mikasika izay famahana ny olan’ny OTIV Boeny izay tao Antananarivo.
mardi, 04 février 2020 16:27
Governemanta Ntsay Christian: « Tsy hita taratra ao mihitsy ny Grand Sud –Est », hoy ny Senatera Ratongavelonahary Modeste
Nanambara ny Loholon’i Madagasikara Ratongavelonahary Modeste, fa tsy hita taratra ao anatin’ny Governemanta Ntsay Christian mihitsy ny avy any amin’ny Grand Sud –Est, avy any Vatomandry ka hatrany Tolagnaro, na ireo nantsoina avy any ivelany na ireo avy eto an-toerana.
Nanantena ny hametraka ny olony ao Mahazoarivo, ny mpanohana ny filoha avy amin’ny Grand Sud –Est nefa na ny mambra ny efa tafiditra tao anaty governemanta aza nesorina, ary ireo nikasa hiditra tsy nisy tafiditra, hoy ny fanamarihana nataon’ity Loholona ity.
Ny filoham-pirenena anefa nilaza fa hanao fisokafana ary maro ireo zanaky ny Grand Sud –Est na avy eto an-toerana na ny avy any ivelany nametraka CV, hoy hatrany ity fanazavany. Ny zava-misy anefa na tamin’ny nametrahana ny governemanta Ntsay voalohany aza dia efa tsy hita taratra tao ny Grand Sud –Est, indrindra fa Vatovavy Fitovinany izay « berceau de la civilisation malagasy », ka mametra-panontaniana ny zanak’iny faritra iny.
mardi, 04 février 2020 16:18
Vinaninoro- Ambositra: Norobain’ny jiolahy ny fitaovan’ny CEG
Nisy namaky ny alin’ny alahady hifoha ny alatsinainy 3 febroary ny CEG Vinaninoro, ZAP Ambositra II, Cisco Ambositra. Entana maro no very toy ny boky, milina fikajiana, angady, lamban-databatra, eny hatramin’ny fanalahidin’ny efitranon-tsekoly.
Tonga nijery ireo Ray aman-dreny sy ny Fokonolona sady nanokatra fanadihadiana. Afaka niakatra ihany ny mpianatra io alatsinainy io na nisy fihemorany aza ny ora nanombohan’ny fampianarana.
mardi, 04 février 2020 16:09
Fanodinkodinam-bola: Natolotra ny « Pôle Anti-Corruption » androany ilay « Trésorier Municipal » ny CUA
Sarona nandritra ny fitsirihana nataon’ny Mpitsirika ankapobeny ara-panjakana ny fahabangam-bola mihoapampana nefa tsy voazava tao amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
150 tapitrisa Ariary no tsikaritr’ireo mpitsirika teo ampiandohana, herinandro lasa izay. Niitatra hatrany amin’ny 3 miliara Ariary ny vola banga, voahodinkodina teo anelanelan’ny taona 2019-2020 rehefa nohalalinina ny fitsirihana.
Voapaingotra ny « Trésorier Municipal ». Araka ny loharanom-baovao dia niaiky io fanodinkodinana io ity farany. Araka ny loharanom-baovao hatrany dia efa niezaka nanentsina ny banga ihany izy saingy tsy feno ara-potoana, talohan’ny nahatongavan’ireo Mpitsirika ankapobeny ara-panjakana.
Natolotra ny « Pôle Anti-Corruption » androany ny raharaha.
mardi, 04 février 2020 15:56
Mahabo: Milaza ho mitondra mpanakanto, fanafody gasy no ao anaty valiziny
Nosamborin’ny Polisy i Julio taorian’ny fitarainana nataon’ny tompon’ny trano fandraisam-bahiny iray tao Mahabo, Faritra Menabe.
Roa herinandro no nipetrahan’i Julio tao amin’ilay trano fandraisam-bahiny ary milaza ho mitondra artista. Isan-kariva anefa izy vao mivoaka ny trano, fihetsika izay nampiahiahy ny tompon’ny hotely nitoerany ka nanaovany fanairana teny amin’ny Polisin’i Mahabo.
Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ireto farany, ka naka sy nisava ny entan’ilay tovolahy ny 1 febroary 2020 teo. Ody gasy, fitomboka, finday, lamba no tao anaty valizy. Nisy kahie mirakitra fomba famakiana trano sy fakana vehivavy koa tao anatiny. Nilaza ho tsy mitondra mpanakanto indray izy nandritra ny famotorana.
Natolotra ny Fampanoavana amin’ny Fitsarana ambaratonga voalohany teto Morondava androany ny raharaha.
mardi, 04 février 2020 15:52
Aretina homamiadana: 1600 isan-taona ny olona tsaboina amin’ireo hôpitaly eto Madagasikara
Mankalaza ny Andro manerantany hiadiana amin’ny homamiadana, isaky ny 04 Febroary, i Madagasikara.
Ny lohahevitry ny fankalazana tato anatin’ny telo taona 2019-2021 dia ny hoe “I am … and I will” izay azo adika amin’ny teny Malagasy hoe :“Fantatro ny tenako, ary fantatro ny tokony hataoko” na koa hoe : “Handray fanapahan-kevitra mifandraika amin’izany aho”.
Ny fankalazana ny andro iadiana amin’ny homamiadana amin’ity taona 2020 ity dia mifantoka indrindra amin’ny fampiasam-batana.
Raha ny antotanisa dia eo ho eo amin’ny 1600 isan-taona ny olona voan’ny homamiadana tsaboina any amin’ireo hôpitaly eto Madagasikara. Ny vinavina nokajian’ny OMS anefa dia mety ho mahatratra 18 400 isan-taona izany.
mardi, 04 février 2020 15:45
Malawi: Nofoanan’ny Fitsarana momba ny Lalampanorenana ny fifidianana filoham-pirenena
Didim-pitsarana 500 pejy, lanonana ara-pitsarana naharitra adin’ny 9, no namoahan’ny Fitsarana momba ny Lalampanorenana any Malawi ny didy, omaly, fa foana ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin’ny 21 mey 2019.
Tanterahina ao anatin’ny 150 andro ny fifidianana, raha tsy manao fanoherana ny didim-pitsarana ity ny antokon’ny filoha Peter Mutharika. Ity farany izay voafidy fanindroany tamin’ny isam-bato 38 %, raha tsy nofoanana ny fifidianana filoham-pirenena.
mardi, 04 février 2020 15:36
Kenya: Nodimandry teo amin’ny faha-95 taonany ny filoha teo aloha Daniel arap Moi
Nanao fanambarana androany ny filoha Uhuru Kenyatta, fa nodimandry teo amin’ny faha-95 taonany ny filoha teo aloha Daniel arap Moi.
Manomboka anio ny andro fisaonam-pirenena any Kenya mandram-pandevina ny razana, izay tsy mbola voatondro ny andro hanatanterahana azy.
Filohan’ny Repoblikan’i Kenya teo anelanelan’ny 1978 ka hatramin’ny 2002 i Daniel arap Moi.
mardi, 04 février 2020 15:22
Vonjy voina: Nampahery sy nitondra fanampiana ho an’ireo traboina ny filoha Rajoelina mivady
Nitohy tany Alaotra ny dian’ny filoha Rajoelina mivady omaly nitondra fanampiana sy nampahery ireo mpiray tanindrazana traboina noho ny andro ratsy.
Tao Ambohijanahary sy Beanana, samy Kaominina ao amin’ny Distrika Amparafaravola ny delegasiona notarihin’izy ireo. Ahitana traboina maro, ary nitondra takaitra tamin’iny andro ratsy ity ireto Kaominina ireto.
Nahetsika ireo fitaovana vao azon’ny Tafika Malagasy toy ny fiaramanidina, hekikoptera nitatitra ireo fanampiana. Misy ny andiana mpitsabo mandray an-tanana ireo tratry ny tsy fahasalamana.
Tany an-toerana ihany koa ny solontenan’ny fandaharanasan’ny Firenena Mikambana momba ny sakafo, ny solontena maharitry ny Banky Iraisam-pirenena.